Guddoomiyaha SONYO oo sheegay inay ku guuleysteen 21 dhallinyaro ah oo noloshooda wax lagaga bedelayo dhanka dhaqaalaha
Home WARARKA Guddoomiyaha SONYO oo sheegay inay ku guuleysteen 21 dhallinyaro ah oo noloshooda...
Hargeysa(Berberanews)-Kulankan oo ah kii 34aad ee ay isugu yimaadaan tan iyo intii dhidibada loo taagay dalladda dhalinyarada ee heer qaran ee SONYO, xubnaha golaha sare ee dalladdaasi ayaa shalay si rasmi ah uga furmay xarunta dalladda Sonyo ee magaaladda hargeysa.
Guddoomiyaha dhalinyarada dalladda heer qaran ee Sonyo Cabdicasiis Siciid Saalax oo isna halkaasi khudbad ku aadan maraaxilkii uu soo maray kal-fadhiyada kala duwan ee golaha sare ee dalladdani leedahay iyo sidoo kale kal-fadhigani waxa uu kaga duwanaan doono, “Dalladda dhalinyarada heer qaran ee Somaliland waxa ku bahoobay ilaa 56 urur oo dhamaan degmooyinka iyo gobollada dalka ka kala socda. Waxay ku aasaasan yihiin ogolaanshaha dastuurka Somaliland ee ah in bulshadu ay samaysan karto ururo iyo madalo ay isugu yimaadaan. Sidoo kale waa madal maandheytkeedu yahay isxilqaan iyo isdirid ama waxa la yidhaa (Voluntarism). Dalladda dhalinyarada ee isu timid 2003-dii waxay isugu yimaadeen oo ay ku bahoobeen sidii ay wax u qaban lahaayeen, isla markaasina ay wuxuun u tari lahaayeen dhalinyarada jamhuuriyadda Somaliland. Ayuu yidhi guddoomiyaha dalladda dhalinyarada heer ee Sonyo, waxaanu intaasi ku daray “intaas oo sano wasaaradda keliya ee aanu lasoo shaqeynaynay waa wasaaradda dhalinyarada. Intii aanu wadashaqeynayayna, maadaama aynu wadajir usoo samaynay qorshaha qaranka ee labaad qaybtiisa dhalinyarada, oo runtii wasaaradda iyo Sonyo ay ku guulaysteen inay ku daraan 21 maxsuul oo dhalinyarada shantaa sano la doonayo in noloshooda wax lagaga beddelo. In wasaaradda aanu kala shaqeynay siyaasaddii dhalinyarada lagu gaadhsiin lahaa in wax loo qabto. Kulankan oo kale ayaanu ugu talogalnay inaan wax ku eegno arimahaas.” Ayuu yidhi
Gabogabadii Boos Mirre Maxamed wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha oo isna dhankiisa hoosta ka xariiqay siday ka xukuumad ahaan uga go’an tahay garab siinta da’yarta iyo sidoo taageerida xubnaha golaha sare iyo guud ahaanba dalladda dhalinyarada heer qaran ee Sonyo, “dhalinyada uun baa wax bedesha adduunka, idinkuna waxaad haysataan wadan nabad ah, horumarka iyo shaqo abuurkana idinkaa laydinka doonayaa inaad keentaan, oo waxa idinka jira dhalinyaradii Intiative-ka ahayd. hore waanu usoo Discuss-garaynay, imikana ka xukuumad ahaan waxay diyaar u tahay inaydun kuwada shaqaysaan, intii aydun dadka ku maagayseen ee ahaa ‘hala helo Transparency iyo musuqmaasuq la’aan. ayuu yidhi wasiir Boos Mirre.
Previous articleMasuulliyiin ka tirsan Dawladda Findland oo ka qaybgalay furitaanka Safaaradda Somaliland
Next articleGuddoomiyaha Baarlammaanka Somaliland oo farriin hanjabaad ah u diray Pauntland